भोजपुर घटना: मृतक राईकी पत्नीले रुँदै सरकारलाई गरिन् यस्तो आग्रह – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured भोजपुर घटना: मृतक राईकी पत्नीले रुँदै सरकारलाई गरिन् यस्तो आग्रह
प्रहरीले ‘हतियारधारी समूहका करिब ३५ वर्षीय निरकुमार राईको साथबाट ठूलो चिनियाँ पेस्तोल र त्यसको म्याग्जिन एक-एक थान र उक्त पेस्तोलमा लाग्ने गोली छ राउण्ड बरामद भएको’ जनाएको छ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको दलले औपचारिक रूपमा सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा नगरे पनि देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका हिंसाको जिम्मेवारी लिने गरेको छ
‘विप्लव’ विरुद्ध सरकारको कठोर रूप, ‘समाधानका तीन सूत्र’
विप्लवको दलका अन्य ४/५ जना व्यक्तिहरू फरार भएको र उनीहरूको खोजतलास गर्नुका साथै घटना सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
बीबीसीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भनिन्, “त्यसको एक घन्टापछि एकजना दिदीले बोलाउनु भयो। म सानो बच्चा लिएर त्यता जाँदै थिएँ, प्रहरीले बाटो बन्द गरेका थिए। के भयो भनेर सोध्दा प्रहरीले विप्लवका कार्यकर्तासँग भिडन्त भएको र मान्छेहरू मारिएको बताए।”
“त्यसपछि ती दिदी कहाँ पुग्दा यो मान्छे चिन्छ्यौं भनेर अनुहार घोप्टो परिरहेको मान्छेको फोटो देखाइन्। फोटोमा रगताम्य देखिन्छ। तर घटनास्थलमा रगत देखिन। पानी परिरहेको थियो।”
उनले भनिन्, “आफू त सानो बच्चा पढाएर बसेको मान्छे, केही जान्दिन, घटना के भएको हो भन्नेबारे अब छिनोफानो सरकार र पार्टीले गर्नुपर्छ।”
‘आइन्दा यस्तो घटना नहोस्‘
“म तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आइन्दा यस्तो खालको घटना नहोस्, आखिर मर्ने र मार्ने जो भए पनि दुबै जनाको मृत्यु भयो। मर्ने नेपाली दाजुभाई नै हुन्। सरकारले यस्तो काम गर्नु भएन। आज यो घटना भयो भोलि अर्को होला, सरकारले के गर्न खोजेको? विशेष गरेर सरकारले कुरा बुझ्नु पर्‍यो।
सरकार भनेको देशको अभिभावक हो। सरकार, मन्त्री, गृहमन्त्री आमाबाबु हुन्। बाबुआमाले यस्तो गर्न मिल्दैन। आखिर उनीहरूका पनि छोराछोरी छन्। आज मेरो श्रीमान बित्नु भयो। भोलि अरू दाजुभाई दिदीबहिनीको यस्तै हालत होला। सरकारले (विप्लवको दललाई) प्रतिबन्ध लगायो, आफ्नै तरिकाले गरिखाँदै आएका सोझा साझा जनतालाई, त्यसैले मान्छेहरू मारिइरहेका छन्। मारिएका प्रहरी दाजुभाईका पनि त श्रीमती थिए। उनी पनि म जस्तै विधवा भएर बस्नु पर्ने भयो। मृतक दुबैको के दोष थियो? तपाईँहरूले कसरी हुन्छ नेता, सरकार र मन्त्रीहरूलाई ब्युँझाउनु होस्। किन भने बाँच्नु छ, शान्ति ल्याउनु छ।”
“जो मारिए उनीहरूबीच के दुश्मनी थियो र? त्यसैले प्रतिबन्ध हटाउनु पर्‍यो। सोझा सिधा जनताले गरिखान पाउनु पर्छ। सरकारले पनि घमण्ड नगरोस्, पार्टीले पनि नगरोस्। आज म जुन दु:खमा छु, अब यस्तो दु:खमा अरू नपरुन् भन्न चाहन्छु।”